Moovly: Uyilo lweeVidiyo zooPopayi, iiNtengiso zeBanner okanye iiP infographics | Martech Zone
Moovly: Uyilo lweeVidiyo zooPopayi, iiNtengiso zeBanner okanye iiP infographics
NgoMvulo, Agasti 12, 2013 Douglas Karr
Umyili wethu unzima emsebenzini, kutshanje uvelisa ifayile ye- ividiyo yoopopayi yeLungelo kwi-Interactive. Ngaphandle kobunzima boopopayi, ukuhambisa ezinye zeevidiyo kuthatha iiyure kusetyenziswa izixhobo ezisemgangathweni zedesktop. Ngaphandle (Okwangoku ikwi-beta) inethemba lokuyitshintsha loo nto, ibonelele ngeqonga elivumela nabani na ukuba enze ngokulula iividiyo zoopopayi, iintengiso zebhanile, iintetho ezisebenzisanayo kunye nomxholo onyanzelisayo.
I-Moovly sisixhobo esilula kwi-Intanethi esikuvumela ukuba wenze umxholo ophilayo ngaphandle kokuba ube yingcali yemultimedia. Ukudala umxholo wemithombo yeendaba ngoku kulula njengokudala i-PowerPoint izilayidi. I-Moovly kulula ukuyisebenzisa kwaye yenza wonke umntu abonakale njenge-multimedia pro.
Imizekelo yokusetyenziswa kwe Ngaphandle indawo:
IiVideos zoopopayi -Sebenzisa i-Moovly ukwenza ividiyo ehlanganisiweyo, umboniso wemveliso, isifundo esithandekayo okanye indlela-yevidiyo ngendlela elula necacileyo. Yongeza ilizwi, isandi kunye nomculo kunye nokuvumelanisa yonke into usebenzisa indlela elula yexesha. Shicilela ividiyo yakho kwiYouTube, kuFacebook, uyibeke kwiwebhusayithi yakho okanye uyikhuphele usetyenziso lwangaphandle.
Imiboniso 3.0 -Ulibale malunga nezilayidi. Gxila kumxholo wakho kwaye ungeze ukubonwa ngokulandelelana okunyanzelekileyo okuxhaswe ngotshintsho olunomdla kunye noopopayi obamba ingqalelo yabaphulaphuli bakho. Xhasa intetho yakho ngendlela entsha kodwa elula. Guqula ngokulula intetho yakho ibe yividiyo kwaye ngokungafaniyo.
Bonisa iiNtengiso -Tsala umdla ngesindululo: yenza eyakho ibhena, skyscraper okanye ezinye iintengiso ezibonisa oopopayi bakho okanye ezinye iiwebhusayithi. Uyilo oluqinisekileyo lokunyusa, izibhengezo okanye eminye imiyalezo kuyo nayiphi na ikhusi: umabonwakude, ukusasaza, i-smartphone, ithebhulethi,… Yenza ikopi enye ukuze wenze umahluko omninzi owuthandayo, nakweminye imilinganiselo.
I-infographics esebenzayo -Nika inkxaso ibali lakho ngemifanekiso ebonakalayo yolwazi, imikhwa, amanani okanye enye idatha. Sebenzisa iitshathi, iimephu, imizekeliso kunye nezinye izinto ezibonakalayo ukubonisa imibala, uphando okanye iingxelo. Yenza i-infographic yakho isebenzisane: vumela abaphulaphuli bakho bafumane ulwazi olongezelelweyo besebenzisa i-mouse-ngaphezulu okanye ucofe amanyathelo, izinto ezivelelayo kunye nolunye unxibelelwano.
Umboniso -Sebenzisa i-Moovly ukwenza eyakho iividiyo zomculo. Ngenisa ingoma ye-mp3 yomculo, yongeza imifanekiso, umculo, oopopayi okanye iziqwengana zevidiyo. Ngqamanisa oopopayi bakho kwisingqi kwaye uthumele ngaphandle indalo yakho ukuze wabelane ngayo nabahlobo bakho.
Amakhadi e-E -Yila amakhadi akho e-e ophilayo okanye isimemo esikwi-Intanethi kuwo nawuphi na umsitho. Yothusa abahlobo bakho kunye nosapho ngomyalezo wokuqala okanye isibhengezo. Hlanganisa iifoto, oopopayi kunye nesicatshulwa kwisimemo esinyanzelekileyo kwi-Intanethi okanye kwiminqweno. Papasha indalo yakho kuFacebook, Youtube okanye… kwi Ngaphandle!
tags: infographic yoopopayiIvidiyo evakalayooopopayiiqonga oopopayiinfographic esebenzayoemovly
Agasti 12, 2013 kwi-10: 06 AM
Wow, ndiza kuyijonga le nto ngokuqinisekileyo.